कता हराए, राजु परियार !::netpatrika
कता हराए, राजु परियार !
नेपाली लोकसंगीतका सर्वाधिक सफल गायक राजु परियारबारे धेरैलाई अत्तोपत्तो छैन । नेपाली गीतसंगीतको इतिहासमा सवै भन्दा धेरै गीत गाएका परियार अहिले सांगीतिक क्षेत्रमा गुमनाम जस्तै छन् । राजु परियारले झण्डै दश हजार लोक तथा दोहोरी गीत गाएका छन् ।
उनले गाएका धेरै गीतले बाजी मारेका छन् । ‘गड गिफ्ट’ स्वरले परिचित राजु परियार पछिल्लो तीन चार बर्षदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा त्यति सक्रिय छैनन् । लम्जुङ्ग स्थायी घर भएका परियारको अहिले बसोबास कहां छ ? के गर्दै छन् ? किन गाउने छाडे गीत ? भन्ने प्रश्न उनका शुभेच्छुक र स्वयं कलाकारले गर्न थालेका छन् । काठमाण्डूमा झण्डै आधा दर्जन रेकडिङ्ग स्टुडियोले लोकगीत धेरै रेकर्ड गर्छन् । तर ती स्टुडियोमा राजु परियार नपुगेको धेरै भयो । लोक दोहारीलाई व्यवसायीक बनाउनमा राजुको स्वरलाई पनि ‘जस’ दिने गरिएको छ ।
बरिष्ठ गायिका बिमाकुमारी दुरा भन्छिन् ‘मैले त राजु भाईको मुख देख्न नपाएको जुगौं भयो ।’ परियार र दुराको पुरानो घर लम्जुङ्ग नै हो । दुरा थप्छिन् ‘ पोखरा बस्छ भन्ने सुनेकी छु, कहिले कांही फोन गरेर आउंछु त भन्छ तर कता जान्छ कता ?’ तीजताका एक दुईवटा गीतमा स्वर दिएका थिए राजुले । संकलक एकनारायण भण्डारीले केही दिन अघि राजुलाई काठमाण्डुमा भेटेको सुनाए । भण्डारी भन्छन् ‘ राजुको स्वर बिस्थापित हैन, गायकीमा समस्या छैन तर स्टुडियोमा समय नदिने समस्या ठूलो हो ।’ एकनारायणले राजुको स्वरमा केही दिन अघि गीत पनि रकेर्ड गराएको बताए । मोवाइल नम्बर फेरिरहने र स्थायी बसोबासको थाहा नहुंदा धेरैले राजुको स्वरमा गीत रेकर्ड गराउन पाएका छैनन् ।
गीतको मर्म नबिग्रने गरि गीत गाउने सफल गायकको कोटीमा राजु पर्छन् । पछिल्लो समयमा घरायशी समस्याले बिछिप्त भएका राजु अहिले पोखरा बस्ने हल्ला छ । प्रिज्म रेकर्डिङ्ग स्टुडियोका प्रमुख तथा म्यूजिक एरेन्जर बिबि अनुरागीले राजु परियारको जत्तिको अझै सम्म कसैको स्वर नभएको बताए । अद्भूत जादू छ राजुको स्वरमा तर चाहिएका बेला सम्पर्कमा नै हुन्नन् अनुरागी भन्छन् ‘ फाट्टफुट्ट गीत रेकर्ड भाको छ, मैले पनि राजुलाई गीत बनाइदिएको छु ।’ देश विदेशमा हुने सांगीतिक कार्यक्रममा उनको माग निक्कै बढ्दो छ । तर उनी सम्पर्कमा छैनन् ।
बिबी अनुरागीका अनुसार विदेशमा कार्यक्रममा लैजान पटक पटक फोन आइरहन्छ तर उनको पत्तो हुंदैन । ०६२ सालतिर राजुले एकै दिनमा झण्डै ५। ६ वटा गीत रेकर्ड गर्थे । एउटा गीत गाएको पांच हजार पारिश्रमिक लिने राजुको माग अहिले पनि उस्तै छ । उनले गाएका फूलमा मौरी, डुल्ने बेलामा, धोका दिनेलाई के भनौं र खोई, भैंसी पालेर, रुमाल धोको छु, सुनपानी, लालुपाते नुग्यो भूंइतिरलगायत हजारौं गीत सफल
-kathmandu today .com
बलि‍उड फिल्म निर्देशक तथा निर्माता करण जोहरले ‘बाहुबली’बाट चर्चामा आएका अभिनेता प्रभासलाई बलिउडमा डेब्यू गराउने बिचारलाई त्यागी दिएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएको खबर अनुसार अब करणले प्रभासलाई बलिउडमा डेब्यू गराउने तयारीमा थिए। करणको धर्म प्रोडक्सनको व्यानरमा प्रभासलाई अनुबन्धन गराउन निकै जोड समेत भएको थियो। स्रोतका अनुसार प्रभासले २० करोड भारु माग गरेपछि निर्माता जोहरले उनलाई आफ्नो ब्यानरबाट खेलाउने बिचारबाट पछि हटेका छन्। एसएस राजामौलीको फिल्म ‘बाहुबलि’को दुई...